Tababare Jurgen Klopp Oo Si Faah Faahsan Uga Hadlay Bixitaankii Philippe Coutinho, Badalkiisa Iyo Xaalada Naby Keita Ee Haddii Uu Bishan Kooxdiisa La Soo Midoobi Doono. - Laacib.net
Tababare Jurgen Klopp Oo Si Faah Faahsan Uga Hadlay Bixitaankii Philippe Coutinho, Badalkiisa Iyo Xaalada Naby Keita Ee Haddii Uu Bishan Kooxdiisa La Soo Midoobi Doono.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa maanta oo jimce ah saxaafada kaga soo hormuuqday shirkiisa jaraa’id ee ka horeeya kulanka dag ee Manchester City ay kula ciyaari doonaan Anfield, waxaana wax laga waydiiyay bixitaankii Philippe Coutinho iyo waliba xaalada xidiga Reds aan wali la soo midoobin ee Naby Keita kaas oo la hadal hayay in uu bishan January soo gaadhi karo Anfield inkasta oo heshiiska Liverpool iyo RB Leipzig uu xagaaga ku eegyahay.
Ugu horayn taaare Jurgen Klopp oo ka hadlaya sida ay kooxdiisu wax walba ugu samaysay in ay Coutinho sii haystaan ayaa yidhi: “May jirin doorashooyin kale. Haddii uu jiri lahaa qof laga yaabo in uu cadhaysan yahay, si wayn u niyadjabsan yahay haddii ay sidani jiri lahahyd, kadib waxay noqon lahayd tababaraha kooxda uu ciyaartoygu ka baxayo”.
Klopp oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: ” Laakiin anigu ma cadhaysni sababtoo ah waxaan ogahay in xaqiiqdii aanu wax walba samaynay si aanu Phil ugu qancino in uu halkan sii joogo oo aanu sii wada socono. Isaga riyadiisa ayay ahayd (In uu Barca ku biiraa), waana xaqiiqda markii aan sheegay in Liverpool uu hal oo kaliya koox uga baxayo waxaana waajib ahayd in aanu taas aqbalno”.
Klopp oo ka hadlaya dadaalkii ay kooxdiisu ku bixisay joojinta Coutinho ayaa yidhi: “Kooxdu waxay dagaalamaysay ilaa ilbidhiqsigii ugu danbeeyay waxwalba ayay isku dayday”. Ayuu Klopp saxaafada ka hor sheegay isaga oo qiraya in ayna maamulka kooxdiisu si sahlan ku sii dayn Coutinho.
Laakiin Klopp ayaa sheegay in ay ciqaab marin kareen xidiga ree Brazil wuxuuna yidhi: “Wax aad u adag ayay ahaan lahayd haddii aanu sheegno taas oo la samayn karayay: ‘Eeg halkan ayuu qandaraaskaagu yahay waxaana waajib kugu ah in aad halkan joogto”. oo aanu isaga u isticmaalno qaybta labaad ee xili ciyaareedka”.
Dhinaca kale Klopp ayaa ka hadlay in ay suuqa u gali karaan badalka Coutinho wuxuuna yidhi: “Waxaanu indho furan ku eegaynaa suuqa kala iibsiga laakiin ma sanayn doono waxyaabo waali ah. Waxaanu doonaynaa waxa saxda ah ka hor waxa qaaliga ah”.
Ugu danbayn Klopp ayaa wax laga waydiiyay xaalada Naby Keita iyo haddii ay kooxdiisu bishan January keensan doonto Anfield wuxuuna yidhi: “Fahamkaygu waa in ayna jirin wax laga sheegaa, taasi waa sida ay tahay. Isagu waa ciyaartoy Leipzig ah, taasi waa waxa aan ogahay, isla markaana uu xagaaga halkan joogi doono, taas ayaa sidoo kale ah waxa aan ogahay”.